Hygroelectricity, dhonza simba kubva kune hunyoro hwemhepo. | Green Renewables
Hygroelectricity, dhonza simba kubva kune hunyoro hwemhepo.
Nuria | | Simba reHygroelectric, Renewable simba
Vatsvakurudzi vanoverengeka vakatanga chidzidzo ichi pamusoro pekugona kwe bvisa simba kubva mumhepo mwando, panguva imwechete iyo yaizoshanda kudzivirira kukuvara kunokonzerwa nemheni uye mabhanan'anaHongu, inogona kunge iri chokwadi mune iri kure kure remangwana, kunyangwe pachine nzira refu yekuenda kunatsiridza ino system, kuitira kuchengetedzeka kushambadzira.
Fernando Galembeck, muongorori paUniversity of Campinas muBrazil, anoti anovimbisa kuti achakwanisa kushandura magetsi anotepfenyurwa mumhepo kuita chinhu che renewable energy inoshanda uye ecological. Kuedza kwakaitwa nevekuBrazil ekutsvagisa kwaive kurongedza nzvimbo ine hunyoro iyo yaitenderera silica nealuminium phosphate. simba rakaunganidzwa uye yakashandurwa kuita zvimwe zvinhu. Nekudaro, chokwadi ichi chakasimbisa kuti madonhwe emunyoro mune zvakatipoteredza azere nemagetsi, zvinopesana nezvakambofungidzirwa.
Ivo vanogona kuiswa munzvimbo dzakanyorovera zvakanyanya, vatengesi vehygroelectric, iyo yaizotora simba uye yaizoshandiswa mudzimba, mafekitori, zvitoro, nzvimbo huru, nezvimwe. Zvakare munzvimbo dzinogara kuine dutu, vaunganidzi vemasimba vanozoisirwa kupinza magetsi y dzivisa kubuda kwemheni, iyo inogadzira kufa uye kurasikirwa nezvinhu.
Pfungwa yepamberi zvakare kubva dzivisa tambo dzemagetsi, uye mairi magetsi aigona kufambiswa nemafungu, sezvo redhiyo, terevhizheni, runhare, nezvimwe zvave zvichiita kusvika parizvino. Kunatsiridzwa kwekuyedzwa uku kunogona kureva kugadzira simba nyowani inowedzeredzwa inoremekedza nharaunda. nzvimbo, uyezve dzivisa njodzi dzinogadzirwa nemheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba reHygroelectric » Hygroelectricity, dhonza simba kubva kune hunyoro hwemhepo.
Huru isingazivikanwe inomuka kwandiri.
Ndinoda kuziva kana maitiro aya achikanganisa makore?
kune ayo echisikigo kuumbwa, kuzvitonga, mhando kana kusimba?
Isu tinoziva kuti ivo vanogadzirisa ecosystems nekupa mvura kune ese marudzi ehupenyu.
Pakati pezvimwe zvinhu, zvinobatsira kudzivirira pasi kubva pakupisa.
Ini ndinogovana izvo zvinoda kukurumidza kuchinjira kune isiri-inosvibisa simba rinogona kumutsiridzwa;
asi ini ndinofunga izvi zviri kuzokanganisa makore, zvichikuvadza zvisikwa uye hunhu.
Chikamu chidiki chemakore chichatiunzira matambudziko akaipisisa:
kuwedzera kumhanyisa kupisa kwepasi uye kuparadza
kubereka kwevhu (masango, masango, zvirimwa, zvipfuyo),
nzizi (hupenyu hwemumvura, kusanaya), nezvimwe. kuvaita nzvimbo dzerenje.
Ini ndoda kufunga kuti iri harisi rimwe bhizinesi reumwe mukana wekuwana mukana;
kuti, kuti vawane mari uye purofiti yakawanda inonyengera vanhu,
ine nharo dzakatenderwa neboka remasayendisiti evarume.
Ndinoda kuratidza chimwe chinhu chakakosha, kuzvizivisa iwe nekukurukura:
Ini ndinoti iro rakachena chete simba rine zero choutsi harikwani.
Kana tikaramba tichipinda jekiseni richiwedzera simba, rinofanira kubuda kumwe ……
Ndiri kureva kuti tembiricha inoungana muhuwandu hwakawanda,
kupfeka pasi uye kuboora yedu inodiwa mamiriro zvakanyanya.
Zvichida simba rinogona kuwedzerwa zvisingaite pasina kukanganisa
nharaunda; kunyangwe ichigadziriswa uye yakachena?
Ndinoyeuka bharuni inoputirwa kusvika pakuputika kana muputi wekumanikidza uyo wakafukurwa.
Marudzi ebhanhire rezuva kana zuva